कुन शिर्ष नेता कहाँबाट उमेदवार सिफारिस भए ? विवरणसहित | mulkhabar.com
कुन शिर्ष नेता कहाँबाट उमेदवार सिफारिस भए ? विवरणसहित
October 8, 2017 | 9:11 am 902 Hits
A meeting between the leaders of the CPN Maoist Centre, the Nepali Congress and the Federal Alliance at the Prime Minister Pushpa Kamal Dahal's residence in Baluwatar, on Tuesday, December 27, 2016. Photo Courtesy: PM's Secretariat
A meeting between the leaders of the CPN Maoist Centre, the Nepali Congress and the Federal Alliance at the Prime Minister Pushpa Kamal Dahal’s residence in Baluwatar, on Tuesday, December 27, 2016. Photo Courtesy: PM’s Secretariat
मंसिर १० र २१ गते हुने संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस थालेका छन् । हालसम्म भएकाे उम्मेदवार सिफारिसमा केही शीर्ष नेताहरु एकभन्दा बढी क्षेत्रबाट उम्मेदवारकाे सूचीमा परेका छन् भने केही एक क्षेत्रमा मात्रै सिफारिस भएका छन् ।
डडेल्धुरा कांग्रेसका दुई समूहले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेका छन् । देउवा ०४८ देखि नै डडेल्धुराबाट निर्वाचित हुँदै आएका छन् । उनी पहिलो संविधानसभामा कञ्चनपुर र दोस्रो संविधानसभामा कैलालीबाट निर्वाचित भएका थिए ।
नेता पौडेल तनहुँ १ बाट सिफारिस भएका छन्, तर सर्वसम्मत हुन सकेनन् । सो क्षेत्रबाट गोविन्दराज जोशी, शंकर भण्डारी, गोविन्द भट्टराई र रामचन्द्र पोखरेल सिफारिस भएका छन् । क्षेत्र नं. २ बाट प्रदीप पौडेल, ध्रुव वाग्ले, पुष्पराज पराजुली, जितप्रकाश आले सिफारिस भएका छन् । नवलपरासी–१ बाट लड्दै आएका महामन्त्री डा. शशांक यसपटक क्षेत्र नं. २ बाट लड्दै छन् । तर, जिल्लाबाट सिफारिस आएको छैन । कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेता विमलेन्द्र निधिसहितका नेताको सिफारिस आउन बाँकी छ ।
मोरङ १ बाट डिकबहादुर लिम्बू, २ बाट सुजाता कोइराला र डा. मीनेन्द्र रिजाल, ४ बाट महेश आचार्य र डा. मीनेन्द्र रिजाल, ५ बाट अमृत अर्याल, ६ बाट डा. शेखर कोइराला र डा. डिला संग्रौला सिफारिस भएका छन् ।
नुवाकोट–१ बाट अर्जुननरसिंह केसी र डा. रामशरण महत सिफारिस भएका छन् । क्षेत्र घटेकाले उनीहरू प्रतिस्पर्धी भएका हुन् । क्षेत्र २ बाट डा. प्रकाशशरण महत, बहादुरसिंह लामा र जगदीश्वरनरसिंह केसी सिफारिस भएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली गृहजिल्ला झापा–५ र सिरहा–१ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट सिफारिस भएका छन् । मधेस आन्दोलनको उद्गमस्थल सिरहाबाट चुनाव लड्न उनलाई पार्टीभित्रै दबाब छ । झापाबाट चारपटक निर्वाचित ओली पहिलो संविधानसभामा पराजित भएका थिए ।एमाले नेता माधव नेपाल काठमाडौं–२, रौतहट १ र ४ बाट सिफारिस भएका छन् । काठमाडौं–२ बाट पहिलो संविधानसभामा पराजित र दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित नेपाल यसपटक सोही क्षेत्रबाट लड्ने तयारीमा छन् । रौतहटमा स्थानीय तहमा एमाले शून्य भएको छ ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल इलाम–१ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । खनाल पाँचौँपटक उम्मेदवार सिफारिस भएका हुन् । ०५६ बाहेक उनी चारपटक सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बर्दिया–१ र प्युठान–१ बाट उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । अघिल्लोपटक यी दुवै क्षेत्रबाट जितेका उनले उपनिर्वाचनमा बर्दिया छाडेका थिए । यसपालि बर्दियाबाटै लड्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
नेता नाराणकाजी श्रेष्ठ गोरखा–२ बाट सिफारिसमा परेका छन् । तर, एउटै गठबन्धन बनाएका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि यही क्षेत्रबाट चुनावमा उठ्दै छन् । माओवादी नेताका रूपमा दुईपटक निर्वाचित भट्टराई यसपालि सूर्य चिह्न लिएर उठ्दै छन् ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा दाङ–२ बाट सिफारिस भएका छन् । उनी पहिलो संविधानसभामा दाङ–३ बाट र दोस्रो संविधानसभामा रोल्पा २ बाट निर्वाचित भएका थिए । –नयाँ पत्रिकाबाट